Dulmiga Dawlada Muuse Biixi Oo Debeda Usoo Baxay,Iyo Kharash Faro Badan Oo Ay Ku Bixisay Buun-Buuninta Waxqabadka Xukuumada Ee 120ka Cisho Ee Ugu Horeeyey
Monday April 16, 2018 - 12:22:06 in Wararka by Wariye Tiriko
Xukumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa warbaahinta madaxa banaan ku qasbaysa inay baahiyaan barnaamij lagu sheegay waxqabadka xukumadda ee 120-kii maalmood ee ay xilka haysay.
Madaxtooyada Somaliland ayaa dabbada ka riixaysa baahinta barnaamijkani lagu sheegay waxqabadka xukumadda ee 120-kii maalmood ee ay xilka haysay, kaas oo dadka siyaasada faallaanqeeya ay ku tilmaameen mid xukumaddu magac ku raadinayso iyadoo aan waxqabad muuqda ilaa hadda dalka ka qaban, xili ay xilka hayso mudo ku siman shan bilood.
Warar ku sahabsan Arintan Oo Mareegta Wararka Ee BurcoOnline Mediaheshay ayaa sheegay in karaaniyiinta madaxtooyada Somaliland ay baahinta barnaamijkani laba qaybood u kala qaybiyeen, kuwaas oo aduun lacageed oo tiro badan u qorsheeyay sidii warbaahinta looga sii dayn lahaa barnaamijkan, waxaana wararku intaas ku darayaan in madaxtooyadu telefiishanada dalka ka hawl gala kula heshiisay inay siinayso lacag kumanaan dollar ah hadii ay baahiyaan barnaamijkan lagu sheegay waxqabadka xukumadda Somaliland, waxaana la sheegay in fikiran ay mulkilayaasha telefiishanadu xukumadda ku raaceen kuwaas oo qaatay lacag gaadhaysa 2000$ (Laba Kun Oo dollar)
Dhan kale warar hoose oo Mediasoo gaadhaya ayaa sheegay 12 wargeys oo kasoo baxa magaalada Hargeysa ay diideen inay baahiyaan waxqabadka Xukuumadda ee 120 maalmood, Waxana la tilmaamay in sababta ay u diideen inay baahinayaan barnaamijkani ay tahay qiimaha lacagta oo ay mulkiilayaasha wargeysyadu ka biyo diideen, qiimaha lacagta ee xukumaddu wargeysyada u qorsheysay ayaa la sheegay in ay tahay 100$ (Boqol dollar)
Siyaasiyiinta darawiinta ka ah qasriga madaxtooyada Somaliland eebeesha madaxweyne muuse biixi u badan ayaa indhaha ka qarsaday kaalinta Mareegaha ugu tunka wayn Somaliland ay dalka kaga jiraan, kuwaas oo aan sinaba usoo hadal qaadin shabakadaha ugu waaweyn dalka, dhankooda mulkilayaasha mareegaha ugu caansan Somaliland ayaa la tilmaamay in ay habeenadii ugu danbeeyay kulamo joog hoose ku soconaya ay magaalada hargeysa ku yesheen kuwaas oo ay u cuntami wayday qorsha xukumadda madaxweyne biixi ay indhaha kaga qarsatay milgaha ay warbaahinta Online-ka ahi dalka ugu fadhido.
Dadka siyaasada ka faalooda ayaa sheekadan ku tilmaamay mid fal-jab ku ah qaranimada iyo maamuska Somaliland, waxaana baraha bulshada, goobaha lagu kulmo iyo rayul-caamka Somaliland ay siweyn u hadal hayeen maalmihii danbeeyay qorashayaan xukumaddu ku laalushayso qaybo ka mid ah warbaahinta madaxa-banaan, iyadoo aan ilaa hadda waxqabad muuqda dalka ka qaban.
Ugu Danbeyn tan iyo markii uu talada dalka la wareegay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa soo baxaayay fadeexado kala duwan oo madaxtooyadu ku kacayso, waxaana marar kala duwan xukumaddu amaro aan dhaqan-galin ay dul dhigtay saxaafada madaxa banaan, waxaana sidoo kale mudadii xukumaddu talada dalka haysay aanay ku talaabsan waxqabad muuqda oo shacabkii soo doortay ay ku qanci karaan, iyadoo la saadaliyay in xukumaddu ay mucaaradnimadii ugu adkayd wajahayso.